Ergeyga Gaarka ah ee QM oo cambaareeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka kala dhacay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Muqdisho | UNSOM
07:30 - 01 Oct
Ergeyga Gaarka ah ee QM oo cambaareeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka kala dhacay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Muqdisho
Muqdisho – Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Haysom, ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii argagaxiso ee maanta ka kala dhacay magaalada Gaalkacyo iyo caasimadda Soomaaliya ee lagu dilay sheekh caan ah iyo tiro kale oo ah dad rayid ah.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii aroortii hore saaka lagu qaaday xarun uu leeyahay wadaadka Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi ee ku taalla koonfurta magaalada Gaalkacyo. Warbaahintu waxay sheegtay in wadaadku uu horey kooxda jihaad doonka uga helay hanjabaad ah inay dili doonaan.
“Weerarradii maanta lala beegsaday dad rayid ah ee joogay magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo waxay muujinayaan sida kooxada xagjirka ah ayna ugu aabayeelin una qadarinin xurmada ay leedahay nolosha baniaadanka,” ayuu yiri Mudane Haysom. “Ma jiro ajenda siyaasadeed ee xalaal ah oo lagu gaari karo dil aan loo meel-dayin ee loo geysto dad rayid ah oo isugu jira rag, haween iyo carruur, Qaramada Midoobayna waxay la garab taagantahay dadka iyo dowladda Soomaaliya sida ay u diidanyihiin xagjirnimada. Waxaan tacsi u diraynaa qoysaska iyo asxaabta dadkii dhintay, waxaana inta dhaawaca ah u rajeynaynaa inay si buuxda uga soo kabtaan dhaawacyadooda.”
 Ololaha sanadlaha ee 16-ka maalmood soconaya ee lagu doonayo in lagu joojiyo tacaddiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha ayaa billowday
 Ololaha sannadlaha ee 16ka maalmood ee u hawlgelidda la dagaallanka xadgudubka ku salaysan jinsiga ayaa lagu daah furay Soomaaliya